कांग्रेस नेता सिटौलालाई कोरोना संक्रमण – bampijhyala.com
Home > समाचार > Covid -19 > कांग्रेस नेता सिटौलालाई कोरोना संक्रमण
२७ मंसिर २०७७, शनिबार १५:५० bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । बिहीबार मात्रै सिटौलाले आफ्नै निवासमा गुटको भेला गराएका थिए । उनी बिहीबार बिहान सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा भएको पदाधिकारी तथा पुर्वपदाधिकारी बैठकमा समेत सहभागी थिए ।
शुक्रबार स्वाब दिएका नेता सिटौलालाई शनिबार बिहान कोरोना संक्रमण भएको रिपोर्ट आएको हो । नेता सिटौलाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफुलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएका छन् ।
उनको स्वास्थ्य अवस्था भने सामान्य छ । उनले आफ्नो सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरुलाई समेत सजग हुन र परीक्षण गराउन आग्रह गरेका छन् ।
उनले फेसबुक पेजमा लेखेका छन्, ‘हिजो २०७७ साल मंसिर २६ गते गरिएको कोभिड–१९ को पिसिआर परीक्षणबाट मलाई पजेटिभ देखिएकोले केही दिनयता मेरो नजिकको सम्पर्कमा रहनु भएका सबैले आवश्यकता अनुसार परीक्षण गर्नुहुन र सावधानी अपनाउनु हुन अनुरोध गर्दछु ।’
सिटौला अहिले होम आइसोलेसनमा बसेका छन् । संक्रमण पुष्टि भएपछि उनी शनिबारको आकस्मिक केन्द्रीय समिति बैठकमा भने गएनन् ।
तामाकोशी गाउँपालीकामा कोरोना संक्रमण तिब्र, आज बेलुका ५ बजे देखि ८ गते बेलुका ५ बजेसम्म शहरे शिल २७ मंसिर २०७७, शनिबार १५:५०
सम्झनामा जेठ ३ २७ मंसिर २०७७, शनिबार १५:५०
शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदा किन घोप्टो परेर सत्नुपर्छ ? २७ मंसिर २०७७, शनिबार १५:५०
माओवादी केन्द्र कस्तो बनाउने ? प्रचण्डले मागे सुझाव २७ मंसिर २०७७, शनिबार १५:५०
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक २७ मंसिर २०७७, शनिबार १५:५०